सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ बनाउन शुरु « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ बनाउन शुरु
२७ चैत्र २०७५, बुधबार ११:५३
सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राका लागि रथ बनाउने तयारी शुरु भएको छ । रथ बनाउनका लागि आवश्यक सबै काठ, बेतबाँस जुटिसकेको छ भने आवश्यक सामग्री बनाइरहेको छ । मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सम्पन्न गर्नका लागि धेरै समुदायको सहभागिता हुन्छ ।
काठ काट्ने, काठबाट आवश्यक सामग्री बनाउने र रथ बनाउने काम फरक-फरक जातिको हुने गुठी संस्थान ललितपुरका प्रमुख शैलेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । काठ काट्ने जिम्मेवारी पाएका बोसी समुदायले काटेर ल्याइसकेको उहाँले बताउनुभयो । बाराही आवश्यक सामग्री निर्माणमा जुटिसकेका छन् । ञँवालले केही दिनपछि नै पाङ्ग्रा, धमालगायतका भाग कस्ने, बाँध्ने काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यो वर्ष रथ निर्माणका लागि थोरै मात्रै काठ ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्ष एक वर्षलाई आवश्यकभन्दा धेरै काठ ल्याइएको थियो । उपत्यकाको सबैभन्दा लामो जात्राका रुपमा रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा रहेको छ । मच्छिन्द्रनाथलाई छ महीना बुङ्गमती र छ महीना पाटनमा राखिन्छ ।
वर्षेनी पाटनमा हुँदा विभिन्न जात्रा र पर्वहरु हुने गर्छ भने १२ वर्षमा एक पटक बुङ्गमतीमा समेत भव्यरूपमा जात्रा मनाइन्छ । जात्रा मनाउनका लागि वर्षभरि नै विभिन्न कामहरु भइरहने कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २७ चैत्र २०७५, बुधबार ११:५३
मंगलबार राति खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्दै, कुन राशिले हेर्ने कुन् राशिले नहेर्ने ?
काठमाडौँ : मंगलबार अबेर राति खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण देख्न सकिन्छ । सूर्य र चन्द्रमाबीच पृथ्वी
आज हरिशयनी एकादशी, निराहार व्रत बसी घरघरमा तुलसी रोपिँदै
काठमाडौं : आज असार शुक्ल एकादशी अर्थात तुलसी रोप्ने दिन हो । आज हिन्दू धर्मावलम्बीको
रामबहादुर बम्जन ३ वर्षको लागि फेरि महाध्यानमा
काठमाडौं : ’लिटिल बुद्ध’का नामले चिनिएका रामबहादुर बम्जन ३ वर्षको लागि महाध्यानमा बसेका छन् ।
के तपाईको छोरीको विवाह भइराखेको छैन ? यसो गर्नुहोस् चाँडै नै हुनेछ विवाह
काठमाडौँ : हाम्रो समाजमा केटीको चाँडै विवाह भएको राम्रो मानिन्छ । तर कतिपय घरमा छोरीको
काठमाडौं : आज नेपालभर असार १५ अर्थात् धान दिवस धुमधामले मनाइँदै आएको छ । असार
सुत्ने समयमा यी ५ चीज सिरानीमुनि राख्नुहोस् मिल्नेछ सुख र शान्ति
काठमाडौँ : हामी सबै राति सुत्छौँ । रातको मीठो निन्द्राले हामीलाई बिहान तरोताजा महसुस गराउँछ